Nahemotra 10 andro ny famotsorana ilay Ejiptiana mpikatroka Alaa Abd El Fattah · Global Voices teny Malagasy
Nahemotra 10 andro ny famotsorana ilay Ejiptiana mpikatroka Alaa Abd El Fattah
Nogadraina noho ny hetsi-panoherana i Alaa hatramin'ny taona 2013
Voadika ny 14 Marsa 2019 5:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Shqip, Português, русский, Italiano, English
Alaa Abd El Fattah, sary avy amin'i Nariman El-Mofty.
Nahemotry ny manampahefana Ejiptiana folo andro ny fanafahana ilay bilaogera sady mpikatroka malaza Alaa Abd El Fattah, hoy ny nolazain'ny anabaviny Mona Seif, mpandala ny zon'olombelona tao amin'ny Twitter.
Tokony havoaka amin'ny 17 marsa 2019, andro mahafeno ny dimy taona am-ponja, sazy azony i Abd El Fattah.
Tamin'ny faramparan'ny febroary, namoaka fanavaozam-baovao tao amin'ny Facebook ny fanentanana Afaho Alaa, milaza fa amin'ny faha-27 ny volana marsa indray no avoaka ilay bilaogera, miampanga ny ”fanajakazakam-birao mahazatra” ao amin'ny andrimpanjakana Ejiptiana. Manome antoka indray ny fanentanana fa tsy tokony hiteraka ahiahy ny fanemorana aloha amin'izao fotoana izao:
The truth is the prison authorities have been giving us mixed dates over the past few months because even they find it hard to calculate exactly how long he has been in prison as he has been in and out of prison many times over the past years. They have finally settled on the 27th of March as the last day in his sentence, so accordingly we are tweaking the counter, and continuing the countdown with you
Ny marina dia nanome daty mifangarongaro anay ny manampahefanan'ny fonja tao anatin'izay volana maromaro izay satria na dia sarotra ho azy ireo aza ny mikajikajy hoe firy andro marina moa izy izay no tao am-ponja noho ny fivoahany sy fiverenany am-ponja matetitetika tao anatin'izay taona maromaro izay. Napetraky ry zareo tamin'ny farany fa amin'ny faha-27 marsa ny andro farany anefany ny saziny, ka dia nahitsinay araka izay ny fanisana ary hotohizanay mijotso.
Nosamborina ary nentina niala ny tranon'ny fianakaviany i Alaa tamin'ny Novambra 2013. Mihoatra ny herintaona taty aoriana, tamin'ny Febroary 2015, notsaraina ihany izy ary nomelohina dimy taona an-tranomaizina noho ny “fanomanana” fihetsiketseham-panoherana manitsakitsaka ny lalànan'ny fihetsiketsehana nivoaka tamin'ny taona 2013 izay mandrara ny fanehoam-pitakiana an-kalamanjana tsy nahazoana alalana. Raha nandray anjara tamin'ny fihetsiketseham-panoherana ny fandefasana any amin'ny tribonaly miaramila ny sivily aza i Alaa tamin'ny 26 Novambra 2013, dia tsy nanana anjara andraikitra tamin'ny fanomanana izany izy. Nohamafisin'ny Fitsarana fandravana sazy tao Ejipta izany didy mahazo azy izany tamin'ny Novambra 2017.
Migadra na atao famotopotorana hatrany izy tao amin'ny androm-piainany nandritra ny fotoana rehetra nitondran'ny filoham-panjakana ejiptiana nifandimby. Nosamborina izy tamin'ny taona 2006 ho nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana milamina iray tamin'ny taona 2006. Nandany roa volana am-ponja izy tamin'ny taona 2011, tsy nahita ny nahaterahan'ny zanany voalohany, Khaled. Nosamborina ary nohazonina 115 andro tsy nisy fitsarana izy tamin'ny taona 2013.
Efa ela i Alaa no niasa tamin'ny tetikasam-pikatrohana ara-teknolojia sy politika niaraka tamin'ny vadiny, Manal Hassan. Nivoaka avy amin'ny fianakaviana malaza tamin'ny fandalàna ny zon'olombelona izy, ao anatin'izany ilay mpisolovavan'ny zon'olombelona Ahmed Seif El Islam, rain'i Alaa’, izay efa nigadra imbetsaka nandritra ny fitondran'i Hosni Mubarak. Mpiaro ny zon'olombelona ihany koa ireo anabavin'i Abd El Fattah, Mona and Sanaa Seif, izay efa ela koa no nanao fanentanana manohitra ny fandefasana ny sivily ao amin'ny firenena any amin'ny tribonaly miaramila. Tamin'ny taona 2016 i Sanaa no nizàka enim-bolana am-ponja noho ny filazana fanompana manampahefam-panjakana.
Tsy manamarina ny fiafaran'ny fanefana sazy ity famoahana am-ponja an'i Alaa volana marsa ity, fa tetezamita mankany amin'ny dingana farany tamin'ny didy fanamelohana azy. Aorian'ny famotsorana azy, mbola handany ny alina mandritra ny dimy taona indray any amin'ny komisariàn'ny polisy i Alaa.